Umaki: i-jwplayer | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 26, 2009 NgoLwesine, ngo-Okthoba 23, 2014 Douglas Karr
Lokhu okuthunyelwe okufushane nokumnandi ezindabeni zokulondolozwa kwesikhashana. Amasayithi neziphequluli zakhelwe ukukhulisa izinsiza. Benza kahle kakhulu kwesinye isikhathi ukuthi umphumela wokugcina uphule iwebhusayithi yakho enamandla esikhundleni sokuyibuyekeza kaningi ngendlela ongathanda ngayo. Namuhla bengisebenza neJW Player, isidlali seFlash Movie esidonsa kuhlu lwama-movie ngefayela leXML. Inkinga ukuthi sihlala sibuyekeza ifayela nge